GM4MD.org - Our Story
Frank (the brilliant mastermind behind all this) hailing from Silicon Valley, California reached out to his Burma contacts after seeing the devastating news of the Feb 1. coup in Myanmar of 2021. Having lived in Myanmar previously, studied the language, and possessing an understanding of Burmese, he was extremely heartbroken by what was happening in Myanmar, as he largely considers the country as his second home.
Eager to see ifaglobal action for Myanmar could be organized, he connected with Jan Jan,aKachin-American student, throughamutual contact. Sandra,aMyanmar Chinese-American, who was also eager to find ways to help Burma during the coup then joined not long after by connecting with Jan Jan through STAND, where Jan Jan was serving as Burma Committee Co-Lead.
Hear more about how Global Movement for Myanmar Democracy (GM4MD) came to be from our Co-Founder Jan Jan, here!
ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လို စတင်ခဲ့ပါသလဲ?
Silicon Valley, California က Frank (ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဖြစ်သူ) က ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အာဏာသိမ်းမှုရဲ့ ဆိုးဝါးလှတဲ့ သတင်းတွေကို ကြားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မိတ်ဆွေတွေကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေခဲ့ဖူးပြီး မြန်မာစာကိုလည်း လေ့လာခဲ့ကာ နားလည်နိုင်စွမ်းရှိသူ ဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း ဒုတိယအိမ်လို့ သတ်မှတ်ထားသူဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ အရာတွေ အတွက် အလွန် ကြေကွဲခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီး ကြိုးစားကြည့်ရင်းနဲ့ ဂျန်ဂျန် (ကချင်-အမေရိကန် ကျောင်းသူ) နဲ့ အသိတစ်ဦးမှ တစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆန်ဒရာ (မြန်မာ-တရုတ်-အမေရိကန်) ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ကူညီဖို့ နည်းလမ်းတွေကို အမြဲတမ်း ရှာဖွေနေသူဖြစ်ပြီး ဂျန်ဂျန်က မြန်မာကော်မတီ ရဲ့ တွဲဖက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ STAND မှတစ်ဆင့် ဂျန်ဂျန် နဲ့ ချိတ်ဆက်မိပြီး မကြာခင်မှာပဲ ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တွဲဖက်တည်ထောင်သူ ဂျန်ဂျန် က Global Movement for Myanmar Democracy (GM4MD) ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
GM4MD Co-Founders on their first call with NUG Spokesperson, Dr. Sa Sa, at the beginning of the coup.